टोखामा चल्यो गोली, १ महिला घाइते
काठमाडौं ५, पुस । राजधानीको टोखामा अज्ञात व्यक्तिले एकएक गोली चलाएपछि गोली लागेर एक महिला घाइते भएकी छिन्। गोली चलेलगत्तै प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको छ। घाइते महिलालाई उपचारका लागि ग्राण्डी अस्पताल पुर्याइएको छ। दुर्गा दुलाल नाम गरेकी महिला घाईते भएकी हुन्। उनको कोखामा दुई गोली लागेको र काठमाडौं स्थित
रसुवा ४,मंसिर । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकाएक मंगलबार रसुवागढी–केरुङ सीमा नाकाको अवलोकन गर्न पुगेका छन् । ओलीको केरुङ भ्रमण उत्तरी छिमिकी चीनसँगको सहकार्य वढाउने स्पष्ट संकेतका रुपमा औंल्याइएको छ । एक एमाले नेताले भने रेलमार्ग बारे पहिले नै सहमति भएको र आज अध्यक्ष कमरेडले त्यसको अवलोकन गरेको
वाम गठबन्धनलाई सञ्चार मन्त्री बस्नेतको जवाफ
सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकार सम्‍मेलनमा दिएको वक्तव्य पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नेपाल सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा प्रथमतः मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरणका
सरकारले अध्यादेश र राष्ट्रियसभा गठनबारे २ बजे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै
काठमाडौं ४,पुस । सरकारले राष्ट्रियसभा अध्यादेश र नयाँ सरकार गठनका बारेमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैछ । सरकारले मंगलबार दिउँसो २ बजे सञ्चार मन्त्रालयमा यसबारेमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउन लागेको हो । कम्युनिष्ट गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई
काठमाडौं ३,पुस । सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको १२ सय मेघावाटको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक वित्तिय स्रोतको खाका तयार गरेको छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाकार तयार पार्न गठित समितिले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तिय स्रोतको
चरिकोट (रासस) । कर्मचारी सरुवामा मनपरी गरेको भन्दै एक वडाध्यक्षले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका छन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष हरिशरण शिवाकोटीले वडा कार्यालयको कर्मचारी सचिवलाई आफ्नो सहमतिविपरीत सरुवा गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय
काठमाडौं : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी महासमिति बैठक बोलाउनेबारे निकटस्थसँग छलफल सुरु गरेका छन्। संघ र प्रदेशसभा चुनावमा नराम्रोसँग पराजय भोगेको कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तन, महासमिति बैठक, विशेष महाधिवेशनसम्मको माग उठेपछि देउवाले महासमिति बैठक बोलाउनेबारे छलफल गरेका हुन्। देउवानिकट
सामानुपातिकमा मतान्तर घट्यो, एमाले ५२ हजार मतले अगाडि
काठमाडौं १, पुस । मंसिर १० र २१ गते पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निवाचन प्रणालीतर्फको पछिल्लो मतगणनामा काग्रेंसले मतान्तर घटाएको छ । पछिल्लो परिणाममा एमाले ५२ हजार मतले अगाडि छ । निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणाली व्यवस्थापन शाखाबाट प्राप्त बिहान ७ः३० बजेको जानकारीअनुसार
भक्तपुर २८, मंसिर । नेपाल मजदूर किसान पार्टीको गढ मानिएको भक्तपुर क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ । निर्वाचनमा भाग लिएका दलले कूल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि नेमकिपाले यो कटाउन सकेन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख
काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलगत्तै गठन हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको बैठकको तयारीका लागि जोडतोडसाथ लागिरहेको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले जनाएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सङ्घीय संसद््का लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको तथा
वाम गठवन्धनले छेक्न सकेन् डा.नारायण खड्कालाई
काठमाडौं, २५ मंसिर- उदयपुरको क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डा। नारायण खड्का विजयी भएका छन् । डा। खड्काले ३३ हजार १ सय ४२ मत पाएर विजयी भएका हुन् । उनका निकटम प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेकी उम्मेदवार मञ्जुकुमारी चौधरीले ३२ हजार ५ सय ९४ मत पाएकी
सञ्जयले ढाले वामदेव गौतमलाई
बर्दिया २४ मंसिर, रोशन ज्ञवाली । निर्वाचनका लागि कम्युनिष्ट गठबन्धनका लागि सूत्रधारको भूमिका खेलेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई ७७४ मतले हराउँदै सिचाइँ मन्त्री कांग्रेस नेता सञ्जय गौतम विजयी भएका छन् । बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट वामदेव वाम गठवन्धनबाट उम्मेदवार बनेका थिए । सञ्जयले
वाम गठवन्धनका सुत्राधार वामदेव २८ सय मतले पछाडि
बर्दिया । निर्वाचनका लागि कम्युनिष्ट गठबन्धनका लागि सूत्रधारको भुमिका खेलेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमै हारनजिक पुगेका छन् । बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका बामदेव गौतमलाई नेपाली काँग्रेसका संजय कुमार गौतमले पछाडि धकेलेका हुन् । ७० प्रतिशत भन्दा
प्रधानमन्त्री देउवा छैटौं पटक निर्वाचित, प्रदेश सभामा एक जीत एक हार
डडेलधुरा । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा छैटौं पटक निर्वाचित भएका छन् । डडेलधुराबाट निर्वाचित हुने क्रममा देउवाले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी खगराज भट्टलाई हराएका हुन् । देउवाले २८ हजार ४४ मत प्राप्त गरे । भट्टले २१ हजार १ सय १५ मत मात्र ल्याए
गोरखाबाट बाबुराम विजयी नजिक
गोरखा २३, मंसिर । गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई विजयी नजिक छन् । उनले २७२२३ मत पाएका छन भने उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले २२३२३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
काठमाडौं । बैतडीमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई साढे १० हजारभन्दा बढी मतले पछि पारेको छ । शनिबार बिहान सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार कम्युनिष्ट गठबन्धनले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलार्ई १० हजार ६९९ मतले पछि पारेको हो । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बैतडीमा नेकपा एमालेका उमेदवार दामोदर भण्डारीले
गठवन्धन हिस्स, स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कवहादुर विजयी
हुम्ला २२, मंसिर दाने बोहरा । वाम गठवन्धन र लोकतान्त्रि गठवन्धनलाई पछि पार्दै हुम्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कवहादुर लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । लामा कांग्रेस प्रत्याशी मंगल शाहीलाई ४७ मतले पछि पार्दै विजयी भएका हुन् । पूर्वमन्त्री लामाले कुल ८ हजार ४ सय ९१ मत प्राप्त गरे भने उनका निकट
निर्वाचन अपडेटः वाम गठवन्धन ५ सिटमा विजयी, कांग्रेसले खाता खोल्यो
काठमाडौं २२, मंसिर । पहिलो चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाममा वाम गठबन्धनले अग्रता लिएको छ । मंसिर १० गते सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना बिहीवार साँझदेखि शुरु भएको छ । जारी मतगणनाको मतपरिणाम अनुसार बाम गठवन्धनले ५ ठाउँमा विजय हात पारेको छ भने सत्तासीन नेपाली कांग्रेसले
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कहाँ के भयो ?
विहीबार ४५ जिल्लामा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन छिटपुटका घटना बाहेक शान्तिपूर्ण ढङगले सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा कतै बम विस्फोट त कतै झडपका घटना त सामान्य नै भए । कतिपय स्थानमा किरिया पुत्रीले मतदान गरे त कतै मतदान गर्न गएका व्यक्ति नै घर नफर्केको घटना पनि भयो । एउटा मत केन्द्रमा
काठमाडौं २१,मंसिर । जीवनको उत्तरार्ध । लप्पनछप्पन छैन । जिन्दगीभर त्यस्तै हो । कुनै पार्टी भनेरपनि हिडिएन् । आफ्नो इच्छा लागेको चिन्हमा छाप लगाए । ७५ वर्षीय भाइकाजी महर्जन फिस्स हाँसे । उनले भने,‘भोट दियौं अब के–के गर्ने हुन ?’ बिहान ८ बजे काठमाडौ क्षेत्र नं ४ अन्तर्गत पर्ने श्रम माध्यमिक केन्द्रमा
काठमाडौं । दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको आजको निर्वाचनमा दिउँसो १ बजेसम्म ४० प्रतिशत मतदान भइसकेको निर्वाचन अायाेगले जनाएकाे छ । निर्वाचन आयोगस्थित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार अहिले सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण एवं उत्साहजनकरुपमा
बाजुरामा ठिक ५ बजे मतपेटिका खोलिने
बाजुरा २१, मसिंर । बाजुरामा बेलुकी ५ बजेबाट मतगणना हुने भएको छ । मतगणना गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ भने गणक तथा गणनास्थालका सुरक्षा व्यवस्था मिलाइ सकिएको छ । बाजुरामा पहिलो चरणको निर्वाचन मसिंर १० गते सम्मपन्न भएको थियो । मतगणना कसरी
शीर्श नेता कसले कहाँ गरे मतदान ?
काठमाडौं २१ मंसिर– प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरुले विहानै मतदान गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका–१४ शिवनगरस्थित आधारभूत शान्ति प्रावि केन्द्रबाट मतदान गरे । उनले बिहान ७ बजेर १३ मिनेट केन्द्रकै पहिलो
संखुवासभा मानेडाँडामा ४ जनामाथि खुकुरी प्रहार
संखुवासभा । संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिका – ७ को मानेडाँडामा ४ जना माथि खुकुरी प्रहार भएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा भोटको विषयलाई लिएर खुकुरी प्रहार गरेको समूहले नै फेरि आक्रमण गरेको हो । खुकुरी प्रहारबाट सुर्य बहादुर तामाङ, फुलमाया तामाङ र उनका छोरा घाइते भएका छन् । मंसीर ७ गते स्थानीय सन्तोष बस्नेतको
शिवपुजनले चुनाव लड्न नपाउने
काठमाडौं २०, मंसिर । सर्वोच्च अदालतले वाम गठवन्धनबाट सर्लाही ४ मा उम्मेदवार रहेका शिवपुजन राय उम्मेदवार बन्न नपाउने फैसलामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै उनको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । रायको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै मुद्दाको अन्तिम फैसलामा व्याख्या गर्ने बताएपछि
निर्वाचनको तयारी पूरा : आयोग
काठमाडौ १९,मंसिर, निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको आगामी बिहिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ राजधानीको कान्तिपथस्थित आयोग सभाहलमा बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त डा अयोधी प्रसाद यादवले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी
मौन अवधिको पालना गर्न के–के नगर्ने ?
काठमाडौं १९, मंसिर । पर्सि २१ गते ४५ जिल्लामा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि गएराती १२ बजेपछि मौन अवधि लागू भएको छ । मौन अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक दलले भोट माग्ने प्रचार प्रसार गर्ने कार्य गर्न नपाउने भएकाले त्यस्ता कार्य नगर्न निर्वाचन आयोगले सरकार, राजनीतिक दल,कार्यकर्ता, विभिन्न
घुस लिदालिँदै २ सुब्वा पक्राउ
काठमाडौं १८,मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय कलंकीमा घुस लिदालिँदै २ जना नायब सुब्वा पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सो कार्यालयका नायब सुब्बा शेरबहादुर थापा र नारायणमणी खनाल रहेका छन् । जग्गाधनी धनी प्रमाणपूर्जा बनाउन आएका सेवाग्राहीबाट ३० हजार घुस लिदै गरेको अवस्थामा
गगन डिस्चार्ज, ४.३० बजे सिफलको कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने
मंसिर १८, काठमाडौं । काठमाडौंको नारायणस्थानस्थित चपली हाइटमा बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका कांग्रेस नेता तथा काठमाडौं–४ का कांग्रेस उम्मेदवार गगन थापा शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । उनले साढे चार बजे जयवागेश्वरी स्थित सिफलको चुनावी सभा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । थापाको घरदैलो कार्यक्रमलाई